ब्लेक 21+3 |
यो को व्यापक लोकप्रिय मध्ये एक छ ब्लेक मुक्त बोनस भेरिएसनहरूमा विकास व्यावहारिक खेल. ब्लेक र तीन-कार्ड पोकर - यो वास्तवमा दुई तालिका खेल संयोजन छ. यो एक को सबै मानक गेमप्लेको प्रदान गर्दछ ब्लेक मुक्त बोनस विकल्प संग एक पोकर हात बनाउन एक पक्ष बाजी थाप्न. यो अमेरिकी ब्लेक नियम र ब्लेक लागि यसैले बिक्रेता चेकबाट अनुसार खेलिन्छ, युरोपेली ब्लेक मा विपरीत. यस बिक्रेता ब्लेक बनाउँछ भने त्यो युरोपेली ब्लेक अधिक लाभ छ, तपाईं मात्र आफ्नो मूल शर्त गुमाउनु हुनेछ र र डबल्स राइट्स छैन.
खेलको उद्देश्य बिक्रेता पहिलो कार्ड संग खेलाडी पहिलो र दोस्रो कार्ड को संयोजन प्राप्त गरेर एक पोकर हात बनाउन छ. आधार खेल अनुमति दिइएको न्यूनतम र अधिकतम शर्त हो $1 र $2000 क्रमशः. छेउमा बाजी को एक न्यूनतम देखि भिन्न $1 अधिकतम $200.
यो संग खेलिन्छ6को डेक 52 कार्ड.
सबै कार्डहरू प्रत्येक सम्झौता अघि reshuffled छन्.
बिक्रेता सबै 17s मा खडा.
डबल तल कुनै पनि दुई कार्ड अनुमति छ.
तपाईं डबल तल पछि एक अतिरिक्त कार्ड प्राप्त हुनेछ.
विभाजन एक पटक मात्र अनुमति छ, लगायत किनेकी.
डबल तल पनि विभाजित पछि अनुमति दिएको छ.
बीमा उपलब्ध छ.
कार्ड छेउमा शर्त पेआउट लागि योग्य गर्न सम्हाल्न अघि खेलाडीहरू एक पक्ष शर्त राख्न आवश्यक.
आधारभूत बाजी पेआउट:
ब्लेक - 3:2
बीमा - 2:1
यो ब्लेक मुक्त बोनस अप गर्न को एक payback प्रदान गर्दछ 99.63% आधारभूत बाजी मा.
निम्नानुसार विभिन्न साइड बाजी उपलब्ध र उनको सम्बन्धित पेआउट छन्:
जो संयोजन को मा फ्लस3एउटै सुट को कार्ड. भुक्तानी अनुपात छ 5:1.
सीधा जो3मिश्रित सूट को लगातार रैंक को कार्ड. भुक्तानी अनुपात छ 10:1.
तीन एक प्रकार को जो3मिश्रित सूट को तर एउटै दर्जा संग कार्ड. भुक्तानी अनुपात छ 25:1.
जसमा सीधा फ्लश3एउटै सुट को लगातार रैंक को कार्ड. भुक्तानी अनुपात छ 40:1.
उपयुक्त3एक प्रकार को जो3एउटै सुट को नै दर्जा संग कार्ड. भुक्तानी अनुपात छ 100:1.
को ब्लेक द्वारा प्रस्तावित छेउमा शर्त नहुनु हो 92.86%.
यो खेल धेरै चिल्लो र बुझ्न सजिलो छ जो एक इन्टरफेस प्रदान गर्दछ. यो को गेमप्लेको ब्लेक मुक्त बोनस धेरै सहज तरिका जो खेलाडीहरू धेरै रमाइलो र उत्तेजना अनुभव गर्न अनुमति दिन्छ मा आगम. 2-मा-1 खेल आधारभूत बाजी बाहेक पक्ष बाजी राखेर विशाल भुक्तानी कमाउन सम्भावित प्रदान. मुख्य बाजी को मामला मा घर किनारा छ 0.41% जबकि यो छ 4.62% पक्ष बाजी को मामला मा. यो ब्लेक मुक्त बोनस निश्चित भएको सबै भन्दा राम्रो थपिएको मध्ये एक छ 21+3 ब्लेक भेरिएसनहरूमा.
फोन बिल Coinfalls क्यासिनो द्वारा ब्लेक पे